Lungisa i-zucchini nge ushizi no-utamatisi kuhhavini
I-Zucchini iyimifino engenakuzithoba edayiswa ezitolo ezinkulu futhi emakethe cishe yonke unyaka wonke. Ngenxa yokuthi ngokweqile akusho ukuthi akukho ukunambitheka okuzwakalayo, kungahlanganiswa nayo yonke into: inyama, ezinye imifino (isibonelo, emasimini noma e-solyanka), futhi imifino ingafakwa ku-batter noma kubhaka. Zama ukupheka zucchini nge ushizi kanye utamatisi kuhhavini. Wena nomndeni wakho bayothanda lokhu, naphezu kokudla kwemifino, kodwa izondlo ezithisayo kakhulu - izibhebhe zethenda ngaphansi kwe-cheese crust kuyoba inkambo emibili yesibili yokudla kwasemini, noma ukudla okudliwayo okugcwele. Ngakho-ke, ukupheka kanjani i-zucchini noshizi kuhhavini, funda ku-athikili yethu. Lesi sidlo sihle futhi ngoba isithako esiyinhloko akufanele sikhiwe, kodwa sibhakabhaka. Ngenxa yalokhu, ngeke ibe namafutha amaningi. Ngemuva kokuba i-zucchini noma isitshalo seqanda ziqukethe inani elikhulu lamafutha uma ugwada, kodwa uma ugwa noma uvala lesi sici ungagwenywa. Ngenxa yalokho, kuyoba okumnandi, futhi kuyasiza ngempela.
Ukuze uthole ingxenye enkulu yalesi sidlo uzodinga:
- 800 amagremu we-zucchini (eyodwa yemifino enkulu);
- utamatisi ovuthiwe 2;
- 150 amagremu kwanoma yikuphi ushizi, ungathatha i- "Gouda";
- 200 ml ubisi kunoma yikuphi okuqukethwe kwamafutha;
- 100 gr ufulawa wekolweni ngokugaya;
- izinongo - isigamu sesipuni sethuni, usawoti 1 we-garlic esikhishwe, i-1 isipuni esisha noma i-dill eyomile;
- 50 ml wamafutha yemifino.
Okokuqala silungisa i-zucchini: kufanele ihlanzwe, ihlutshiwe (kodwa uma unemifino encane, awukwazi ukususa isikhumba), uthathe izindandatho ngobukhulu obungaba ngu-0.8 cm. Ukushaya ibhodlela elijulile, hlanganisa amaqanda, ubisi, i-garlic kanye ne-pepper emhlabathini . Kufanele kube mass mass homogeneous. Emva kokuthululela ufulawa zibe izingxenye. Phinda uvuselele, akufanele ube nezibungu. Khona-ke umbuthano ngamunye we-zucchini kumele wehliswe ngaphakathi kwe-batter bese udosa epanini lokuthosa ngamafutha omvino obomvu okwedlula imizuzu emithathu. Imfihlo encane - i-zucchini kufanele iphekwe epanini elishisayo kakhulu lokufisa - ungesabi uma lishisa. Ngakho-ke, inqubo yokupheka iyohamba ngokushesha, futhi imifino izothatha inani elincane lamafutha. Uma wonke ama-zucchini eboshiwe, uwafake ephepheni lokugcoba, faka utamatisi ohlangothini ngalunye lwezotamatisi, bese ufafaza ushizi ovuthiwe (uma ufisa, ushizi ungashukwa futhi uthathe amapulethi amancane). Ekupheleni kokulungiselela, ufafaza isiyingi ngasinye ngomhlabathi omnyama. I-Courgettes ene-cheese no-utamatisi ehhavini, efuthelwa kuma-degrees angu-180-200, udinga ukubhaka cishe imizuzu engu-20. Emva kwalokho, isidlo silungile. Beka eplaneni elihle futhi ngokushesha nikhonze etafuleni. Inqubo yonke yokupheka ngeke ikuthathe isikhathi esingaphezu kwemizuzu engama-40, ngemuva kwalokho ungajabulisa ekhaya ngesidlo sasemnandi noma isidlo sakusihlwa.
Zucchini nge ushizi kanye utamatisi kuhhavini - inketho yokupheka
Le recipe ilula kancane kunayo yangaphambilini futhi ayidingi ukuthosa okuyimpumelelo yemifino emafutheni omquba omisiwe. Ngakho-ke, kungacatshangwa ngokuqiniseka ngokugcwele okuhlukile kokudla kwesidlo. Ukuze ulungiselele, thatha:
- zucchini eziningana ezincane;
2-3 ezivuthiwe, utamatisi enamafutha;
- 50 gr we-shizi kanzima afana ne- "Parmesan";
- izinongo ukunambitha - usawoti, pepper, amakhambi.
Kulesi simo i-zucchini no-utamatisi noshizi kuhhavini zilungiswa ngisho nakakhulu. Hlanganisa imifino ezincekeni ezincane mayelana no-1 cm, engeza usawoti, ufafaza i-pepper encane bese ubhake ku-degrees 180-200 cishe imizuzu engama-5-7. Ngemva kokukhipha kuhhavini, ubeke ucezu lwesitamatisi phezulu uphinde ufafaze ushizi ogayiwe. Okulandelayo, faka i-pan futhi kuhhavini bese upheka uze ushizi ucibilike. Kuzothatha cishe amanye amaminithi angu-5. Isitsha silungile. Kuyo yonke inqubo kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni ngeke uthathe imizuzu engaphezu kwengu-20, futhi umphumela ngeke ube mbi kunayo iresiphi yangaphambilini. Njengoba kunikezwe ukushaywa kwamafutha kanye namafutha, i-zucchini enjalo noshizi utamatisi kuhhavini ingakwazi ukukhokhela ngisho nalabo abahlala ekudleni noma banakekele okuqukethwe kwe-caloric yokudla kwabo. Futhi, izitsha zizoba usizo ezinganeni, ngoba imifino ngaphandle kwamafutha, kodwa ekhishwa ngeshizi - indlela enhle yokufundisa ingane ekudleni okunempilo nokunempilo. Futhi ungakwazi nje ukubhaka zucchini kuhhavini no utamatisi, futhi esikhundleni ushizi kusuka phezulu ufake eziningi imifino fresh. Ukuqukethwe kwekhalori kwesidlo esinjalo kuyoba phansi kakhulu, futhi ukunambitheka kuzodlula konke okulindelweyo. Thatha lezi zokupheka ngenothi, bese udla isidlo esilandelayo uqinisekisiwe ukuba ujabulele isidlo esimnandi semifino yamalungu omndeni wakho.
Izitsha ezivela esitshalo seqanda. Ungadliwa ngemifino enempilo
Ama-biscuits e-Ginger weNyaka Omusha: iresiphi yama-classic enezithombe
I-shortcake ye-pie nekhekhe-izimfihlo zokupheka
Salad "Hector" - omunye izitsha ozithandayo
A simila ku ekhaleni: izimila pathogenic we sinuses
UClive Lewis - umbhali odumile waseNgilandi, umlobi ochungechunge oluthi "Imikhosi YaseNarnia"